अस्तिसम्म सहयात्री अहिले दु’श्मन जस्तो , जम्काभेट हुदा एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन् – Gandaki Chhadke
नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालको प्राङ्गण अस्पतालको प्राङ्गणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको २ वटा टेन्ट राखिएको थियो । जहाँ संघीय संसदका सांसदहरु तथा कर्मचारी कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनका लागि नाम दर्ता लाइनमा उभिएका थिए । नाम दर्ता गरेकाहरुलाई टेन्टभित्र स्वास्थ्यकर्मीले बायाँ पाखुरामा भ्याक्सिन लगाइरहेका थिए । प्रतिनिधि सभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार संघीय संसदका सांसदहरु तथा कर्मचारीहरुलाई ‘को’भिसिल्ड भ्याक्सिन’ दिने कार्यक्रम राखिएको थियो ।
३ दिनसम्म चल्ने भ्याक्सिन दिने सो कार्यक्रमको पहिलो दिन सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेल पनि भ्याक्सिन लगाउन पुगेका थिए । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहमा दुबै अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनीभन्दा पहिल्यै खोप लगाएर फर्किसकेका थिए । अस्पतालको प्राङ्गणमा राखिएको २ वटा टेन्टमध्ये एउटा टेन्टमा दर्ता गर्ने र खोप लगाउने काम भइरहेको थियो भने अर्को टेन्ट खोप लगाएपछि आराम गर्न सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई छुट्टाइएको थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले खोप लगाएपछि सांसदहरुलाई आधा घण्टा आराम गर्न भनिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेतासमेत उपप्रधानमन्त्री पोखरेल मध्याह्न १२ बजे भ्या’क्सिन लगाउन अस्पताल पुगेका थिए । खोप लगाउँदा ठट्टा गरिरहेका पोखरेलले खोप लगाएपछि दौरा मिलाउने क्रममा सोधे, ‘अनि को–को आउनुभयो त आज ?’ जवाफमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले भने, ‘माधव नेपाल आउनुभयो, प्रचण्ड पनि आउनुभयो ।’
पोखरेलले भने, ‘उहाँको त क’न्फर्टेबल ढंगले नै भो होला हैन ? त्यसपछि सञ्चारकर्मीले पनि सोधिहाले, ‘मन्त्रीज्यूलाई कत्तिको क’न्फर्टेबल भयो ? जवाफमा उनले भने, ‘मलाई त उहाँको कन्फर्टेबल भन्दा राम्रो भयो ।’खोप लगाएपछि मन्त्री पोखरेल आराम गर्ने टेन्टभित्र छि’रे । जहाँ अन्य सांसदसँगै नेकपा प्रचण्ड नेपाल खेमाका नेता योगेश भट्टराई बसेका थिए । उनी बसे सँगैको कुर्सीमात्र खाली भएका कारण पोखरेलपनि सोही कुर्सीमा आ’रामका लागि बस्न पुगे ।
सँगै जोडिएको कुर्सीमा बसेपनि दुबैको हे’राइको दिशा फरक थियो । दुवैजना असहज मानिरहेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएपछि आधा घण्टा आराम गर्न भनेपनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेल समय बिताउने बहाना खोजिरहेका थिए । एकछिन उनले खोप लगाएको कार्ड हेरे र कसैलाई फोन गरेर आफूले कोरोनावि’रुद्धको भ्याक्सिन लगाएको जानकारी गराए ।
पोखरेल बसेको अर्को पट्टीको कुर्सी खाली भएपछि त्यहाँ बस्न आइपुगे जसपाका नेता उमाशंकर अ’रगरिया । उनले केहीबेर उमाशंकरसँग मसिनो स्वरका केही कुराकानी गरे । संचारकर्मीहरु कोरोना खोप लगाएका सांसदहरुको प्रतिक्रिया लिइरहेका थिए । नेपाल टेलिभिजनकी पत्रकार कालिका सिवाकोटी को’भिड खोप लगाएर आराम गरेर बसिरहेका सांसदहरुको प्र’तिक्रिया लिइरहेकी थिइन् ।
उनले पहिला योगेश भट्टराईको प्र’तिक्रिया लिइन् । त्यसपछि सँगै रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई पनि प्र’तिक्रिया दिन आग्रह गरिन् । पोखरेलले ठट्टा गर्दै योगेशतिर हात लम्काउँदै भने, ‘उहाँ भाइको लिइहाल्नुभयो, मेरो किन चाहियो र ?’ पोखरेलको ठट्टामा भट्टराई थोरै हाँसे तर २० मिनेटको सँगैको ब’साइमा दुई नेताबीच कुनै अनौपचारिक संवाद समेत भएन । आराम गर्ने समय स’किएपछि भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री पोखरेल आफ्नो बाटो लागे ।
गत मंसिर ५ गते अघिसम्म एउटै सरकारमा मन्त्री रहेका योगेश भट्टराई र ईश्वर पोखरेलको अहिले राजनीतिक मो’र्चा फेरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा वि’घटन गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै भट्टराईसहित अन्य ६ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । का’नुनी रुपमा विभाजन भइनसकेको र राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको नेकपाका दुई पक्ष यतिबेला शक्ति संघर्षमा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि अब यी दुई पक्षबीचको श’क्ति सं’घर्ष संसदमा केन्द्रीत भइरहेको छ । यसकै साइड इफेक्ट पोखरेल र भट्टराईबीचको आजको सं’वादहीनता हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।